Sidee loo abuuraa dhabarka dhabarka si sax ah?
Backlinks waxay lagama maarmaan u yihiin ganacsi kasta oo internetka ah. Webmasters waxay aad u walaacsan yihiin si ay dib ugu noqdaan boggooda internetka maxaa yeelay waxay ka qayb qaadan kartaa dadaalka SEO iyo kor u qaadida heerka websaydhka. Nidaamkan cusub ee darajooyinka Google ee ugu dambeeya, milkiilayaasha bogagga ayaa ka cabsanaya inay abuuraan tayad hoose oo tayo leh iyada oo sababi karta inay hoos u dhacdo iyo xayiraad kale oo Google ah. Taasi waa sababta dhammaan websaydhku ay raadinayaan ilaha webka PR ee sare si ay dib ugu dhistaan. Tirada ilaha websaydhada noocaas ah waa mid xadidan, waana adag tahay in laga helo fursado dhisme oo xiriir ah. Si kastaba ha ahaatee, haddii aysan suurtagal ahayn in shirkadaada ay abuurto xiriir ganacsi leh websaydhka sare ee PR, ma aha sabab sabab u ah farsamooyinka dhisidda spammy. Taa bedelkeeda, waa inaad raadisaa siyaabo kale oo khibrad leh si aad u sameysid dib-u-celin PR. Qodobkani, waxaan ka wada hadli doonaa sidii dib loogu soo celin lahaa bogagga PR10 ee Wikipedia. Dhibaatooyinka ugu weyn ee suuqa kala iibsiga ee sanadkan gudaheeda, waxay ku noqotay dhibaatada ugu wayn ee suuqa kala iibsadaha, sababtoo ah waxay ku dhowdahay in ay kumbuyuutarkan ka badiso. Si kastaba ha ahaatee, tartankan weligeed ah ayaa laga yaabaa inuu faa'iido u keeno ganacsigaaga qaab qaabeysan oo tayo leh. Wikipedia waxaa loo isticmaali karaa suuqyada macaamiisha labadaba si ay labaduba u caawiyaan sugidda mashiinka raadinta iyo ka qaybqaataan hadafka ah ilaha waxbarashada ugu weyn ee adduunka.
Dadku badiyaa waxay si qaldan u fahmaan kaalinta dib u celinta ee Wikipedia. Inta badan waxay u maleynayaan in ay ku filan tahay in lagu daro xiriirkooda "qaybo dibadda ah" haddii mawduucu yahay mid ku haboon wershaddooda bogga. Si kastaba ha noqotee, dhab ahaantii, wax saameyn ah ma bixinayso. Haddii aad leedahay hab xikmad leh oo aad kuugu dhejin karto boggaga Wikipedia, waxay kuu keeni doontaa natiijooyin badan oo wanaagsan. Taas bedelkeeda, waxay sababi kartaa arrimo badan, oo ay ku jiraan in lagu daro domainkaaga liiska ku qoran liiska spam iyo laga mamnuucay Wikipedia.
Qodobkani, waxaan kula wadaagi doonaa qaar ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee ku saabsan dib-u-qabsiga Wikipedia. Sidaa darteed, haddii si sax ah loo sameeyo, waxay weli noqon kartaa faa'iido weyn oo ku ool ah raadinta mashiinka goobta.
Sidee dib uugu beddelay Wikipedia ka dhacay tobankii sano ee la soo dhaafay?
Wikipedia waxaa la aasaasay sannadkii 2001 iyada oo ah ilaha ugu wayn ee shabakada internetka ee dunida. Waqtigaas dib u iibsashada iyo farsamooyinka kale ee dhismaha isugeyntu ma aha mid caan ah. Taasi waa sababta loo ogolaaday qof walba in uu abuuro dib-u-hagaajin ku saabsan Wikipedia. Si kastaba ha ahaatee, miisaanka culus ee Google ee wabiga iyo dhabarka, garsoorayaashu waxay si dhaqso ah u saameeyeen saamaynta SEO. Laga soo bilaabo wakhtigaas, Wikipedia ayaa bedeshay dabeecad si uu u abuuro boggagiisa dofollow. Si looga hortago weerarrada spam ee waaweyn iyo xadgudubyada Google ee ku xadgudubka, Wikipedia wuxuu u fasaxayaa in la geliyo kaliya isku xirnaanta nofollow oo aan ku wareejin juice. Intaa waxaa dheer, Wikipedia wuxuu abuuraa liis gareyn ah oo leh ujeedo ah in la xakameeyo domains ay u arkeen spam.
Inkasta oo backpox-ka dib u saameyn ku yeelanayno SEO-yada ah kuwa aan cidi lahayn, dib-u-celinta Wikipedia ayaa wali ah qaar ka mid ah kuwa ugu baahida badan suuqa. Waxaa lagu sharxi karaa PageRank sare ee ilahaas iyo Google qaabka saxda ah ee xiriirinta ilahaas Source .